Macluumaadka Wakaalada Gobolka | Caafimaadka Maskaxda Texas
Hel Caawimo Naftaada
Caawimaad Qof Kale
Golaha Isu -duwaha Caafimaadka Hab -dhaqanka ee Gobolka oo dhan
Macluumaadka Sharci -dejinta
Warbixinnada iyo Bandhigyada
Wadashaqaynta iyo Hindisayaasha
Barnaamijka Kaalmada Nafaqada Dheeraadka ah
Xidhiidhada Degdegga ah iyo Khayraadka Kale
Xaaladaha Caadiga ah
Jaahwareerka iyo Dhibaatada Walbahaarka Kadib (PTSD)
Naafada Caqliga iyo Koritaanka
Ku lug lahaanshaha Cadaaladda Dambiyada
Websaydhada wakaaladda dawladu mararka qaarkood way adkaan kartaa in la maro. Xubnaha Isku-duwaha Caafimaadka Hab-dhaqanka ee Gobolka Texas oo dhan waxay iftiimisay isku xirnaanta macluumaadka gaarka ah ee waxtar leh ee ka dhex jira hay’addooda.
Guddiga Texas ee Heerarka Jeel
Guddiga Texas ee mareegaha Heerarka Jeelka
Maxkamadda Texas ee Racfaanka Dambiyada
Tusaha Ilaha Caafimaadka Maskaxda
Tusaha Ilaha Caafimaadka Maskaxda oo ka socota Maxkamadda Rafcaanka Dambiyada
Ururka Qareennada Difaaca Dambiyada Texas
Buug -yaraha Caafimaadka Maskaxda ee ku saabsan Karti -u -lahaanshaha Joogitaanka Maxkamadeynta ee Ururka Qareenka Difaaca Dambiyada ee Texas [PDF]
Xarunta Waxbarshada Maxkamadaha Degmada Texas ee Shir -weynaha Caafimaadka Maskaxda ee 2016, Duubitaannada Kulanka
Xarunta Waxbarashada Maxkamadaha Degmada Texas Flowchart
Xarunta Tababarka Maxkamadda Caddaaladda Texas Goobta Caafimaadka Maskaxda
Buug -gacmeedka Caafimaadka Maskaxda ee Ururka Texas ee Degmooyinka
Ururka Texas ee Degmooyinka Kooban ee Sharci -dejinta – Caafimaadka Dabeecadda iyo Nidaamka Garsoorka
Ururka Texas ee Degmooyinka – Fiidiyowga Dhibaatada Caafimaadka Maskaxda
Waaxda Texas ee Adeegyada Qoyska iyo Ilaalinta
La -Shaqaynta La -Shaqaynta Dadka Naafada ah Tusaha Kheyraadka
DFPS waxay dhowaan cusboonaysiisay Tusaha Kheyraadka La Shaqaynta Dadka Naafada ah. Cusboonaysiinta waxaa ku jira macluumaad muhiim ah oo ku saabsan sida shaqaaluhu u codsan karaan Turjumaan Luqadda Calaamadda oo dabooli kara baahiyaha gaarka ah ee qofka qaba iinta maqalka.
Tababbarka Daryeelka Xog -ogaalka Dhaawaca Dhawaan la cusbooneysiiyay
Waaxda Adeegyada Qoyska iyo Ilaalinta (DFPS) waxay aqoonsan tahay saamaynta muddada dheer ee waayo-aragnimada carruurnimada xun sida xadgudubka iyo dayaca ilmaha. Baahida loo qabo wax ka qabashada dhaawacyada ayaa ah qayb muhiim ah oo ka mid ah bixinta adeeg wax ku ool ah. Saameynta dhaawacyada waxaa la kulma carruurta, qoysaska, daryeelayaasha, iyo bixiyeyaasha adeegga bulshada ee u adeega. Tababarkani waa il bilaash ah daryeel -bixiyeyaasha nidaamka daryeelka carruurta, xirfad -yaqaannada, u -doodayaasha, daneeyayaasha iyo xubnaha dadweynaha ee danaynaya inay wax ka bartaan saameynta dhaawacyada.
Tilmaan -bixiyahan kheyraadka guud ee la heli karo wuxuu tilmaamayaa siyaasadda la xiriirta Caafimaadka Maskaxda wuxuuna bixiyaa tilmaamo ku saabsan u adeegidda qoysaska ay saameeyeen Xanuunnada Caafimaadka Maskaxda.
Tusaha Khayraadka Isticmaalka Maandooriyaha
Tilmaan -bixiyahan kheyraadka guud ee la heli karo wuxuu tilmaamayaa siyaasadda la xiriirta Dhibaatada Isticmaalka Maandooriyaha wuxuuna bixiyaa tilmaamo ku saabsan u adeegidda qoysaska ay saameeyeen Xanuunnada Isticmaalka Maandooriyaha.
Xiriirrada Dheeraadka ah iyo Kheyraadka Daryeelka Xog -ogaalka ah
Tilmaan -bixiyahan wuxuu siinayaa shaqaalaha DFPS iyo daneeyayaasha helitaanka tababarrada, siyaasadda, qiimaynta, iyo ilaha la xiriira Daryeelka Xog -ogaalka ah.
DFPS Texas Connection Youth
DFPS Texas Connection Youth waxay siisaa ilaha caafimaadka maskaxda, dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha, iyo ka hortagga is -dilka.
Dulmarka Caafimaadka STAR
Star Health waxay siisaa carruurta ku jira Conservatorship DFPS helitaanka adeegyada caafimaadka, ilkaha, iyo adeegyada caafimaadka hab dhaqanka.
Daawooyinka Cilmi -nafsiga
Boggan wuxuu siinayaa shaqaalaha iyo daneeyayaasha macluumaad ku saabsan siyaasadda dawaynta Maskaxda, arrimaha la xiriira dawada, iyo maamulka dawaynta.
Xeerka Guurtida 44
Xeerka Senate -ka 44 wuxuu ka doonayaa DFPS inay ka caawiso qoysaska sidii ay daaweyn ugu raadin lahaayeen carruurta leh khalkhal maskaxeed oo daran.
Caawinta Waalidiinta; Rajada Carruurta
Website -kani wuxuu siiyaa helitaanka waxbarashada waalidnimada iyo ilaha qoysaska. Waxaa jira xiriir toos ah adeegyada dhexgalka dhibaatooyinka iyo caawinta helitaanka daaweynta isticmaalka maandooriyaha, daaweynta caafimaadka maskaxda, adeegyada horumarinta ilmaha, adeegyada daryeelka carruurta, iyo adeegyada sharciga.
Waaxdu waxay abuurtay Qaybta Adeegyada Caafimaadka Dhaqanka bishii Diseembar ee 2018.
Qeybta waxay ka kooban tahay Maamule Qeyb, Takhasusle Daryeel Wargelin Dhaawac leh, Takhasusle Caafimaadka Maskaxda, Seddex Takhasusle Isticmaalka Maandooriyaha, iyo Laba Khabiir oo Baahiyaha iyo Xoogagga Carruurta iyo Dhallinta (CANS). Qeybta waxay caawisaa shaqaalaha goobta haddii ay dhacdo arrimo la xiriira, waxay siisaa tababarro, waxayna u dhaqmeysaa sidii xiriiriyaha Caafimaadka Maskaxda ee Maxalliga ah ama Mas’uuliyiinta Caafimaadka Habdhaqanka, Isbitaallada Caafimaadka Dabeecadda iyo Xarumaha Daaweynta, iyo Xarumaha Daaweynta Isticmaalka Maandooriyaha. Qeybta Adeegyada Caafimaadka Dabeecadda ayaa ku soo bandhigtay shirar kala duwan oo hoggaamineed gobolka oo dhan.
Waaxdu waxay hadda ka qayb qaadanaysaa Hindisaha Rabshada Guriga.
Hindisaha Rabshadaha Qoyska (DVI) ee Qaybta Joogtada ah ayaa soo saaray sagaal tababar oo taxane ah si wax looga qabto rabshadaha qoyska iyo kordhinta shabakadda badbaadada ilmaha/qoyska.
Tababbarka Daryeelka Xog -ogaalka Dhaawaca ayaa la cusbooneysiiyay oo la daabacay 2019 si loogu daro kheyraadyo kala duwan oo loogu talagalay Daryeelka Xog -ogaalka ah oo loo diyaariyey shaqaalaha iyo daneeyayaasha dibadda.
Qiimaynta Baahiyaha iyo Xoogagga Ilmaha iyo Dhallinta (CANS) Hindisaha Telehealth wuxuu u oggolaaday carruurta iyo daryeelayaasha inay ka qaybqaataan qiimeyntan meel fog. Tani waxay kordhisay helitaanka guud ee adeegyada caafimaadka hab dhaqanka ee gobolka oo dhan.
Qorshaha Waxqabadka ee Wakaaladda Caafimaadka Dadweynaha ee DSHS si wax looga qabto Isticmaalka Maandooriyaha.
Qorshe hawleed saddex sano ah oo loogu talagalay DSHS si wax looga qabto isticmaalka maandooriyaha.
Xogta Caafimaadka Texas DSHS
Isbeddellada xogta caafimaadka dabeecadda, oo ay ku jiraan kuwa ku jira daroogada iyo aalkolada, shaqaalaha caafimaadka maskaxda, xirfadaha caafimaadka shatiga leh, iwm.
Warbixinta Walxaha Maamusha ee DSHS
Sharciga Texas wuxuu u baahan yahay in bixiyeyaasha daryeelka caafimaadku soo sheegaan xad -dhaaf xad dhaaf ah oo ku lug leh Kooxda Ciqaabta 1 walxaha la kontoroolo. DSHS waxay hagaajisay sida ay u ururiso warbixinahaan, taas oo u fududaynaysa bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka inay halkan ku soo gudbiyaan xogta.
DSHS TexasAIM – Daryeelka Umusha ee Haweenka qaba Dhibaatada Isticmaalka Opioid
Qeyb muhiim ah oo ka mid ah hindisaha lagu hirgelinayo hab-dhaqannada ugu wanaagsan oo ka dhigaya daryeelka isbitaalka mid ammaan u ah hooyooyinka.
Bogga Guriga ee Caafimaadka Maskaxda iyo Dabeecadda Dugsiga
Dulmarka guud, shuruudaha qaanuuniga ah, isku xirka ilaha caafimaadka maskaxda ee gobolka oo dhan, lagu taliyay barnaamijyo ku-saleysan ku-dhaqanka ugu wanaagsan iyo ilaha qaybyada hab-dhaqanka ugu wanaagsan ee ku salaysan cilmi-baarista.
Horumarinta Caafimaadka Maskaxda
Ka Hortagga Caafimaadka Maskaxda iyo Faragelinta Hore
Ka -hortagga Ku -xadgudubka Maandooriyaha iyo Faragelinta
Ka -hortagga Is -dilka, Faragelinta, iyo Ka -hortagga
Tababarrada Murugada iyo Dhaawaca Jugta leh
Xirfadaha Dhismaha ee la xiriira Maaraynta Dareenka, Aasaasidda iyo Joogtaynta Xiriirrada Wanaagsan, iyo Go’aan-qaadasho Mas’uul ah
Wax -ka -qabadka iyo Taageerada Dabeecadda Wanaagsan iyo Horumarinta Dhallinyarada Wanaagsan
Barnaamijyada Diyaarinta Barayaasha (EPP) Khayraadka
Mashruuca AWARE Texas
Cimilada Iskuulka Ammaan iyo Taageero leh
Guddiga Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Texas
Caafimaadka Texas iyo Adeegyada Aadanaha
“Tusaha Taageerada Bulshada ee Beddelka Daaweynta Caafimaadka Maskaxda Bukaan -jiifka”
Kheyraadka Guriyeynta La Awoodi Karo
Qaybta 811 Barnaamijka Kaalmada Kirada Mashruuca
Barnaamijyada Guriyeynta Caafimaadka Maskaxda Dadka Waaweyn
Adeegyada Gabowga iyo Naafada
Adeegyada dadka gaboobay ayaa laga heli karaa gobolka
Wakaaladaha Deegaanka ee Gabowga
Daryeelka Muddada Dheer
Xarunta Khayraadka Gabowga iyo Naafada
Adeegyada Caafimaadka Habdhaqanka
Caafimaadka Maskaxda iyo Isticmaalka Maandooriyaha
Caafimaadka Maskaxda Carruurta
Tusaha Qoyska ee isticmaalka Adeegyada Caafimaadka Maskaxda ee Carruurta
Jawaabta Opioid -ka Texas ee La Beegsaday
Texas Veterans iyo Barnaamijka Deeqda Isbahaysiga Qoyska
Kooxaha Iskuduwidda Khayraadka Bulshada (CRCG)
Isuduwidda Adeegga CRCG
Daryeelka Gaarka ah ee Iskuduwida ee Qeybta Koowaad ee Maskaxda
Tusaha Tixraaca Medicaid
Isuduwidda iyo Tababbarka
Fiidiyowga Adeegyada Caafimaadka Dhaqanka
Xafiiska Isuduwidda Caafimaadka Maskaxda (OMHC)
Gargaarka Koowaad ee Caafimaadka Maskaxda
Wacyigelinta Caafimaadka Maskaxda
Mashruuca Daryeelka Is-hago
Naafada Caqliga ama Koritaanka
Naafada Garaadka ama Koritaanka (IDD)-Daryeelka Muddada Dheer
Maamulka Naafada Wax -garadka iyo Horumarka (LIDDDA)
Sharaxaada Adeegyada iyo Taageerooyinka IDD (PDF)
Fayo -qabka Caafimaadka Maskaxda ee Dadka qaba IDD
Warbixinno, Bandhigyo, Xeerar, iyo Kuwa Kale
Warbixinada iyo Soo Bandhigid
Guddiyada La -talinta
Xeerarka Maamulka Texas (TAC) Xeerarka
Hanaanka xeer -dejinta
Codsiga Diiwaanada Furan
Caawimaadda Caafimaadka Dhaqanka
Guddiga Garsoorka ee Texas ee Caafimaadka Maskaxda
Guddiga Garsoorka Texas ee Caafimaadka Maskaxda
Guddiga Caddaaladda ee Caafimaadka Maskaxda waxaa abuuray amar wadajir ah oo ka tirsan Maxkamadda Sare ee Texas iyo Maxkamadda Rafcaanka Dambiyada ee Texas. Ujeeddada Guddiga Garsoorka ee Caafimaadka Maskaxda ayaa ah in la hawlgeliyo oo la xoojiyo nidaamyada maxkamadda iyada oo loo marayo iskaashi, waxbarasho, iyo hoggaan, taas oo lagu hagaajinayo nolosha shakhsiyaadka leh baahiyaha caafimaadka dhimirka iyo dadka leh naafonimada aqooneed iyo horumar (IDD).
Waaxda La -talinta ee TMD
Guddiga Halyeeyada Texas (TVC)
Jadwalka Dhacdooyinka TVC
Tusaha kaalmada deeqda ee mareegaha TVC
Waaxda Caafimaadka Maskaxda ee Ciidamadii Hore
Websaytka Guddiga Shaqaalaha Texas
Texas Workforce Commission (TWC) waa wakaaladda gobolka ee lagu soo eedeeyey kormeeridda iyo bixinta adeegyada horumarinta shaqaalaha ee loo -shaqeeyayaasha iyo shaqo -doonka Texas.
Buugga TWC, Tilmaamaha, & Daabacadaha
TWC & Golaha Dhaqancelinta Teksas: Golaha Dhaqancelinta Teksas wuxuu la shaqeeyaa barnaamijyada Dhaqancelinta Xirfadeed ee TWC si loo horumariyo, loogu heshiiyo oo dib loogu eego himilooyinka iyo mudnaanta gobolka.
Macluumaadka maalgelinta ee Barnaamijka Dhaqancelinta Xirfadaha
Adeegyada Baxnaaninta Xirfadaha, Xeerka Mareykanka, Cinwaanka 29, Cutubka 16aad, Qeybta Hoose I
Barnaamijka Dhaqancelinta Xirfadaha Gobolka, Xeerka Xeerarka Federaalka, Cinwaanka 34, Qaybta 361
Guddiga Dhaqancelinta Texas, Xeerka Shaqaalaha Texas, Cinwaanka 7, Cutubka 111
Guddiga Texas ee Indhoolayaasha, Xeerka Kheyraadka Aadanaha Texas, Cinwaanka 5, Cutubka 91
Adeegyada Baxnaaninta Xirfadaha, Xeerka Shaqaalaha Texas, Cinwaanka 4, Cutubka 352
Adeegyada Guddiga Shaqaalaha ee Texas
Adeegyada Guddiga Shaqaalaha Texas
Raadi adeegyada dhaqancelinta xirfadda ee TWC ee dadka naafada jirka ama garashada leh, oo ay ku jiraan indho la’aanta ama naafada aragga.
Warbixinnada TWC: Guddiga Shaqada ee Texas (TWC) waxaa federaal ahaan loo xilsaaray inay iska kaashadaan Qorshaha Gobolka ee Isku-jirka ah ee Texas, qorshe afar sano ah si loo gaaro dhammaan yoolalka shaqaalaha ee gobolka, iyo Golaha Dhaqancelinta ee warbixinta sanadlaha ah ee Texas, oo ay ku jiraan xogta waxtarka barnaamijka VR.
Golaha Dhaqancelinta ee 2015 Warbixinta Sanadlaha ah ee Texas
Qorshaha Gobolka ee Isku -dhafka ah ee Texas ee Barnaamijyada Idman sida uu qabo Xeerka Hal -abuurka Shaqaalaha iyo Fursadda ee Dawladda Dhexe
Xafiiska Maamulka Maxkamada iyo Gudiga Difaaca Caqli xumida Texas
Daabacadaha Caafimaadka Maskaxda ee OCA iyo Qalabka Tababarka
Barnaamijyada Difaaca Caafimaadka Maskaxda ee Texas
Daabacaadan waxay diiradda saareysaa doorka difaaca saboolka ah ee isgoyska caafimaadka maskaxda iyo caddaaladda dambiyada. Waxay qeexaysaa sida Texas wax uga qabato jirrada maskaxda iyo dembiyada, u sahamiso faa’iidooyinka barnaamijyada difaaca caafimaadka dhimirka, oo ay baaraan hawlgalada barnaamijyo dhowr ah oo difaacayaal ah. Ugu dambayntii, TIDC waxay rajaynaysaa in daabacaadani dhiirri -geliso qaadashada ballaadhan ee barnaamijyada difaaca caafimaadka maskaxda.
Jaamacadda Texas Xarunta Sayniska Caafimaadka (UTHSC) – Tyler
Xarunta Wacyigelinta Gobolka
Caafimaadka Maskaxda Ilaha Tababarka ee Dhallinyarada Dhegoolaha ah
Ilaha Caafimaadka Maskaxda iyo Fayo -qabka
Guddiga Texas ee Dhaqangelinta Sharciga